Shirkadda DP World iyo Dawladda Sinigal waxay kala saxeexdeen Heshiis khuseeya Dhismaha Dekedda NDAYANE , kaasi oo ah Heshiis kabaya Heshiiska 50 Sannadood ee Gacan kuhaynta Maamulka Dekedda
Khudbad Gudoomiye Cirro u Jeediyey Reer Laascaanood +Baaq & Fariin uu diray Reer Sool
Shirkadda DP World iyo Dawladda Somaliland waxay toddobaadkan gudihiisa kala saxeexdeen heshiis kusaabsan dhismaha iyo hirgalinta deked cusub ( deepwater port) oo laga dhsidoono NDayane, kaasoona qayb ka noqon doona Heshiiska 50ka sannadood ah ee DP World lagu siiyay Maamulka Dekedaha Dakar
Dekedda cusub ee labada dhinac ku heshiyeeyn in la hirgaliyo waxa laga dhisi doonaa meel Dekedda Dakar u jirta ilaa 50 Km unadhaw Gegeda Diyaaradaha ee Caalamiga ah Blaise Diagne . Sida uu dhigayo Waxkadala Heshiiska Gacan kuhaynta Dekeedda ee 2017, muddada heshiiska waxay koobsan doontaa 2 muddo oo min 25 sannadood ah oo ka bilaabmidoonta taariikhda ay dakedda cusubi si rasmi ah u bilawdo hawl-galkeeda .
Dekedda Ndayane waxay kor u qaadi doontaa doorka iyo ahmiyadda weyn ee Dekedda Dakar u leedahay isku socodaka ganacsiga iyo maraakiibta u kala gudba galbeedka iyo woqooyiga galbeed ee Afrika. Sidoo kalena hirgalinta Dekeddani waxay gacan kagaysan doonaa ka midho dhalinta qorshayaasha horumarinta dhaqaalaha Sinigal, oo uu hormoodka u yahay Mudane, Madaxweyne Macky Sall.
Heshiiska Shirkadda DP World legula galay gacan ku haynta maamulka Dekedda Dakar, waxa ka mid ahaa dhismaha deked cusub oo gaar u ah Konteynarada oo qayb ka ah balaadhint dekedda Dekar. Haseyeeshee, kadib wada tashi ay wada yeesheen Madaxweynaha Sinigal, Mudane Macky Sall, iyo Mudane Suldan Ahmed, Gudoomiyaha Shirkadda DP World, waxay isku afgarteen in hormarka Sinigal u baahan yahay in dekad cusub laga dhiso meel ka baxsan Dakar.
Kadib gorfeyn iyo wadahadal qotodheer, Wasiirka Wasaaradda Kaluumeysiga and dhaqaalaha Badda ee Sinigal, Mudane Alioune Ndoye; Agaasimaha Guud ee Hay’adda Dekeda Dakaar, Abuubakar Sediq Beye, iyo Gudoomiyaha Shirkadda DP World waxay kala saxeexdy heshiisyadan wadada u xaadhay dhismaha iyo hirgalinta dekedda cusub
Shirkadda DP World Dakar SA, oo ah Shirkad wadaag ( joint venture) Sinigal ka aasaasan oo ay wada leeyihiin Shirkadda DP World iyo Hayadda Dekedda Dakar
( PAD) ayaa fulindoonta dhismaha iyo hirgalinta barxad dakaded 300 oo Higtar ah oo u gaar ah rarka iyo dejinta Konteyrada; oo sidoo kalena fulindoonta maalgalinta, nashaqadaynta iyo dhismeyaasha dhulka iyo kaabayaasha badda (maritime infrastructure) ee Dekedda cusub oo 600 oo Higtar ah . Fulinta Wejiga koowaad ee mashruucan wuxuu ku kacayaa $837 milyan oo Doolarka Maraykanka ah, waxaana maalgalindoona shirkadda DP World Dakar, taasi oo ana ah maalgashiga ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee soo mara taariikhda Senegal. Kadibna waxa xigi doona fulinta Wajiga Labaad ee mashuruuca oo ooy ku bixi doonta maalgalin dhan $ 290 milyan oo Doolarka Marayakanaka ah
Wejiga 1aad ee mashruucu wuxuu noqon doona dhismaha dekedda cusub ee konteynarada oo oo ka kooban 840m oo deked ah ( quay) iyo kanaal ( Marine Channel) cusub oo 5km ah oo loogu talagalay rarka iyo dejinta maraakiibta dhererkoodu yahay 366m, iyo waliba maraakiibta konteynarrada ee ugu waaweyn adduunku. Wejiga 2aad ee mashriicuna wuxuu dekedda konteynrada ku kor dhindoonaa 410m iyo kanaalka oo la dheereeye lana gaadhsiiyo in ay ku soo xidhaan maraakiibta dhererkoodu gaadho ilaa 400m.
Wejiga koowaad ee terminalka kontaynarrada Ndayane wuxuu ka dhanac shaqayn doonaa dekedda shaqaysa ee Konteynrada ee Shirkadda DP World Dakar. Maadaama oo yoolka Dawladda ka leedahay mashruuca hirgalinta Dekedda Ndayane uu yahay in helo deked awood u leh in 100ka sannadood ee soosocda ay didiso dhammaan adeegyada dekedaha ee looga baahdo gudaha Sinigal, Dakadda Konteynrada ee la dhisidoonaa waxay deked 3 km iyo dheeraad ( Quay) ah ioo leh barxadda konteynarada oo 300 oo Higtar. Tanina waxay suurtogal ka dhigi doontaa in Dekedda hadda jirta ee Dakar lagu sameeyo dib u habayn oo laga hirgaliyo hudheelo iyo goobo ganacsi ku jeedda badda, iyo deked dalxiis (residential and commercial waterfront and cruise terminal).
Shirkadda DP World waxa kale ooy qorsehyneysaa inay Dekadda Ndayane ka dhinac dhisto Aag Ganacsiyeed Cashuurta ka caagan si ay u kobocda awoodda Sinigal ay ku soo jiidan karto maalgashadayaasha shisheeyaha ah ee isha ku haya ama danaynaya suuq ganacsiyeedka ECOWAS. Hirgalinta Aaggan Ganacisyeedka Cashuurta ka caagan oo ay ku agyaalaan Dekad casr ah iyo gego diyaaradeed caalami ahi waxay gacan weyn ka gaysandoontaa koboca dhaqaalaha iyo abuurida fursado shaqooyin oo mustaqbalka faa’iido weyn u ah muwaadiniinta Sinigaal
Sheek Kante, Wasiirka Madaxtooyada, ahna ergeyga gaarka ah e Madaxweyanahu, wuxuu yodhi: “Dhismahadekedda cusub ee Ndayane wuxuu gayaysiin doonaa Singal inay adkeysato booskeeda ama kaalinta muhiimka ah ee ay ku leedahay isu-socodka ganacsiga badda ee gobolka, waxayna kaalin mug leh ka qaadataa xaqiijinta hamiga Qorshaha Soo Dedejinta Horumarinka Sinigal ee Madaxweyne Maky Sall.
Alioune Ndoye, Wasiirka Kaluumaysiga iyo Gacansiga Baddad, wuxuu yidhi: “Dekedda Ndayane oo qaybweyn katahay mashruuuca dekeddu , wuxuu dalkeenna u horseedi doontaa in uu la soo noqdo ama soo ceshado doorkiisii hoggaamineed, maadaama oo goobta ay ku taalo tahay goob ahmiyad gaar ah leh, oon iyadoo kalena laga heli karin meel kale oo kamid ah dalalka gobolka ah. Maadaama oo ay ku taalo goob udub dhexaad u ah isku xidhka isu socodka ganacsiga badda ee Gobolka, dakaddani waxay noqon doontaa xudun koboc dhaqaale, waana mid ka turjumaysa kuna salaysan hamigii Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Mudane Macky Sall uu ku kalahaa dejinta qorshaha soo nooleynta Siniga (Senegal emergent) ee ujeedkiisu ahaa in wadan keenu noqdo xaruna soo jiidaata isu socodka gaadiidka iyo gacansiga (an integrated and competitive logistics hub)
Abuubakar Sidiq Beye, Maareeyaha Guud ee Hay’adda Dekedda Dakara, wuxuu yidhi: “Hirgalinta dekedda cusub ee Ndayane waxay inaga saacidi ka midho dhalinta wajiga labaad ee qorsha Soonooleynta Sinigal ( the next phase of the Plan Senegal Emergent”.
Suldan Ahmed bin Sulayem, Guddoomiyaha , ahna Maareeyha Guud ee Shirkadda DP World, ayaa isagina yidhi: “Tani waxay noqon doontaa maalgashiga dekedeed ee ugu weyn ee DP World ee Afrika illaa maanta, waxayna caddeyn u tahay sida aan ugu heellannahay Sinigal iyo aaminsanaanta aan aaminsnahay in Sinigal diyaar u tahay gaadhidda koboc dhaqaale oo dheeri ah. Dekeddan cusub waxay u horseedeysa fursado shaqo abuur, in dalku soo jiito maalgashi toos an oo shisheeye oo cusub, iyo fursado ganacsiyo kale oo cusub, kuwaasi oo soo kordhin doonaa ilaha dhaqaale ee dalka . Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Mudane Madaxweyne Macky Sall, hogaamintiisa iyo himiladiisa horumarinta dekedda, iyo inuu nagala shaqeeyo mashruucan ahmyadda gaarka ah ku fadhiya.
Sinigal waa waddankii labaadh ee dhawaan ku biirey World Logistic Passport, oo ah dhaqdhaqaaq ay yagleeshay Dubay ujeedkiisuna yahay kor uqaadidda isweydaarsiga ganacsi u dhexeeya suuqyada soo koraya, iyo in ay xoojiso Dubay doorkeeda hogaamineed ee iskuxidhka ganacsiga Afrika. World Logistics Passport waxa loo aassasey si looga takhaluso ama loo suuliyo caqabadaha ganacsiga aduunka , sida caqabadaha dhanka gaadiidka iyo isku socodka ,ee wakhti xaadirkanna xanibtey ama hortaagan koboca ganacsiga u dhexeeya suuqyada soo koraya
Wax ka ogow Shirkadda DP World
Waxaan nahay hormoodka suurto galiyaha isu scodka shixnadaha ganacsi ee caalamka. Waaanu leenahay Waxsoosaar iyo adeegyo baaxad weyn oo uu dhammeystiran oo koobsnaya is ku xidhka ganacsiga ee badda iyo dhulka, adeegyo dakadeed iyo aagag warshadeed, iyo sidoo kale xalal ku slaysan ticknooljiyada casriga ah oo ku salaysan baahida macaamiishayada.
Waxaan adeegyadan ku fulinaa shabakad caalami ah oo iskuxiran oo ka badan 128 hawlgal oo ka jira in badan 60 waddan oo ku kala baahsan lixda qaaradood ee adduunka, iyadoo joogitaankayagaasina saamayn ballaaran ku leeyihiin kobaca gancsiga iyo koritaanka sayadaha ganacsiga . Meel kasta oo aan ka shaqeyno, hawlgaladayada waxa sal u ah wax ku oolnimo ( sustainability) iyo masuuliyad muwaadinnimo ee shirkadeed, si aanu gacan uga geysano horumraka dhaqaalaha iyo bulsho ee goobaha aan kunool nahay ee aan ka shaqeyno.
Shaqqaahayga xirfadaha kala duwan ee ku sifeysan heellanaant oo ah in kabadan 53,000 oo shaqaale ah oo ka kala socda in kabadan 133 waddan ayaa heegan u ah inay u adeegaan oo adeegyadayada gaadhsiiyaan macaamiisha qiimaha weyn noogu fadhiya . Waxaan tan u sameyneyn si aan uga turjunno dhismaha xidhiidh ay ka wada faa’iideysan karaan dhinacyadu – ha noqoto dowlado, maraakiibta, ganacsatada, iyo daneeyayaasha kale ee ku weheliya silsiladda isu socodka shixnadaha ee adduunka – xidhiidhadaas oo ah kuwo ku dhsian isfaham, is aaminaad iyo iskaash joogto ah.
Waxaan ka fikirnaa mustaqbalka, higsanaa isbedel iyo yagleelidda suuq ganacsi xambaarsan tikniyoolajiyad casriga ah horseeda xalal iyo hal abuuro ganacsi ku slaysan caqli iyo hufnaan, iyo ina aan xaqiijino in hawlgaladayadu noqdaan kuwo saameyn togan oo waarta ku yeesha dhaqaalaha, bulshada iyo deegaankeenaba .
Burco, Waanu Iska Cellin Doonaa Raga xisbiyada Kale Ka Sharaxan, Kulmiyana ,Siyaasi Ramaax
Burco, Xildhibaan dayib Xasan Boobe oo Ka Qaybgalay Xafladii Shaacinta Musharax Aadan Jaamac